Weerar lagu qaaday Ciidamo ka tirsan Xasilinta oo fariisin ka sameestay Xaafadda Ceymiska ee D/Yaaqshiid. – XAMAR POST
Weerar lagu qaaday Ciidamo ka tirsan Xasilinta oo fariisin ka sameestay Xaafadda Ceymiska ee D/Yaaqshiid.
Weerar ku bilaawday Qaraxyo Bam-Baanooyin ah ayaa xalay koox hubeysan waxa ay ku qaadeen Fariisin ay Ciidanka Xasilinta dhawaan ka sameestay Xaafadda Ceymiska ee degmada Yaaqshiid waxaana kadib xigay dagaal socday ku dhawaad 30 Daqiiqo.
Goob joogayaal ayaa sheegay in dagaalka uu dhacay xalay Fiidkii hore waxaana la weeraray Ciidan ka tirsan kuwa Xasilinta Muqdisho oo lagu badalay Ciidan kale oo mudo dheer dagaanaa Saraha Ceymiska waana weerarkii 3aad oo lagu qaado Isbuuc gudihiis.
Dad Careysan oo carqaladeeyay Khubad uu Ra’islawasaare Kheyre ka jeediyay Virginia
Madaxda ugu Sareyso Galmudug oo xalay kulamo ku yeeshay Madaxtooyada Cadaado.